GeekColor: Maqaarka, Qalabka & Waraaqaha. Qalabaynta Gadgets »#BEDIFFERENT - GeekColor.com
DIIDMADA DIINTA BILAASH AH
Buugga Microsoft Surface 2 13.5 "
Laptop Universal Universal
Tayada 3M Vinil. Haddii aan lahayn Resisues & Kabarro. Degganaan.
Laser Cut: Qalab fiican. Waxaa la sameeyey 💚 Spain.
Design Your Own ama ka doorto kumanaan Rinjiga & Textures.
Buuxi Kits. Easy Ku rakibida Iyadoo 2 Warqada Sanadka.
Waa maxay maqaarka?
Maqaaradu waa kuwa ugu fudud, ugu fudud, habka ugu qurux badan ee loo ilaaliyo loona ilaaliyo dhamaan qalabkaaga
Maxaad u doonan lahayd maqaarka qalabkaaga? Halkan waxaa ah dhowr sababood oo waaweyn:
CUDURADA WAQTIGA AH
Waxaa laga sameeyey muraayad lagu dhajiyay gawaarida otomaatig ah, qalab isku mid ah oo loo isticmaalo baabuurta iyo dhinacyada basaska magaalada. Qalabkani wuxuu socdaa!
XADIISKA WAXYAABO LAGU HELO
Waxay qiyaasi karaan miisaanka 5 ee miisaanka (ama shan-kun kiilooga ah 0.005 inch), taas oo ka dhigaysa mid aad u fudud!
CUDURADA LAGU HELO
Haddii aad ka daalan tahay maqaarkaaga ama aad rabto mid cusub, iska daa. Waxyaabaheena gaarka ah kama tagi doono goo ama wixii ka hartay.
CUDURADA WAXAAD U BAAHAN YIHIIN CODSIGA
Haddii aad baabuurkaaga ku dhejin karto qalabka wax lagu xiro, waxaad ku xiran kartaa maqaar. Maqaarkeennu waxay kaloo leeyihiin jajab la duubay oo ka hortagaya goobooyin hawo ah.
XADIISKA WAXAY LAHAYD IN SPAIN
Maqa kasta oo ka timaadda GeekColor waxaa laga sameeyey halkan Spain (Europe). Xarunteena waxay ku taallaa Toledo.
XADIISKA SHAQOOYINKA DHAMMAAN DHAMMAAN DHAMMAAN, DHIBAATOOYINKA IYO DHAKHLIYADA
Qanjirrada ayaa la gooyaa si ay ufilan qalab kasta oo si habboon - ku dhex jira .25mm dulqaad. Tani macnaheedu waa dhammaan dekadaha, koontaroolada iyo qalabka waxaa loo isticmaali karaa si caadi ah.
Ma jeceshahay inuu telefoonkaaga fiiriyo qashinka oo lagu daboolo xagasha, mise waxaad diyaar u tahay inaad aragto oo aad dareento in farqiga maqaarku sameyn karo?
SIDA AAD QALABKA HADDII
# BAAQA BULSHADA
»KORONTIISKA IYO HADDII AAD LAHAYN
Iyada oo GeekColor, marka lagu daro in aad iPhone siiso qaabkeeda gaarka ah, waxaad kordhin doontaa xajinta ayaga oo iska ilaalinaysa dhacdooyinka marka ay soo baxdo.
Kala sooc Samsung
»KA HORREEYA FARIIMAHA
Samsung Galaxy waa magaalo lagu buuxiyo faraha. Maqaalkeennaba waxaad illoobi doontaa weligaa.
Available for: Galaxy S9 Plus / S9 / Ogeysiis 9 / Faylka 8 / S8 Plus / S8 Plus / S7 Plus / S7 Edge / S7 / Ogeysiis 7 / Ogeysiis 5 FE / Faahfaahin 4 / Ogeysiis 6 / S6 Edge Plus / S6 Edge / S5 / S9 / A8 / A7 Plus / A6 / A6 Plus / A8 / J7 / J6 Duo / J4 / J7 / J7 Max / J7 Prime / J5 Pro / JXNUMX Prime
Kala soocaan kombiyuutarada casriga
»DIGNIIN iyo STYLE
Ka dhig taleefankaaga mid gaar ah oo u fiirso ugu dambayntii dhammeystiran ee ugu caansan uguna macquulsan.
Available for: OnePlus / Google Pixel / LG / Huawei / Motorola / Sony / HTC / ZTE / Xiaomi / Asus / Lenovo / Oppo / Alcatel / Qalabka muhiimka ah / Vivo / Tenor
Qalabka telefoonka gacanta
Kala sooc qorshooyinka
»MAYA SI AAD U BAAHAN TAHAY
Ka ilaali kiniinkaaga gebi ahaantiisna iska ilow noocyada isticmaalka. Jooji walaaca ku saabsan isticmaalka iyada oo aan kiis laga bixin.
Kala-doorto qaababka ciyaarta
Kala-doorto xusuustaada iyo kantaroolayaashaada midabada kooxdaada.
Qalabka Isboortiga Qalabka
Kala habeey kombuyuutarrada
»WAXAY LEEYAHAY? KALA DUWAN
Ku raaxee sawir cusub oo ku saabsan kombiyuutarkaaga. Hagaajinta muuqaalka kumbuyuutarkaaga oo aad u badan oo ah qaabab badan iyo midabyo.
Available for: MacBook / MacBook Pro / MacBook Air / Mac Mini / Mashiinka Muuqaalka / Magic Muuqaal / Mashiinka Magic / Microsoft / Razer / HP / Dell / Acer / Universal Laptop
Qalabaynta Qalabka Dheeraadka ah
»QIIMEYNTA LA WADAAGO, 100% GEEK;)
Waxaan sidoo kale abuuri karnaa maqaarka loogu talagalay qalabka caanka ah iyo kuwa cusub: guntimaha, kamaradaha waxqabad ...
Available for: AirPods / Apple TV / Apple TV / Apple Sawir / Shirkadda Apple / iPod Touch / Apple Chargers / Beats / GoPro / DJI / Samsung Galaxy Buds, Wireless Charger, Gear / Amazon Echo / Amazon Dabka TV / Google Home / JBL / JUUL / Nacon / Xiaomi Mi Bankiga Awooda / Wacom / Universal Skins
Haddii aad jeceshahay inaad noqoto Caadi ah oo gaar ah, GeekColor waa goobtaada.
Waxaan bixinaa ah Aqoonsiga Weyn qalabyada shakhsi ahaaneed.
Our qarbeddaduna waa Naqshadeynta iyo Waxaa la soo saaray in Spain ugu fiican Tixgelinta iyo Tayada Sarjirka.
Ilaali oo leh qaab iyo Habee aad qalabka la GeekColor »# BIIFIFERENT
MAGAALADA WESTARAANKA SHAQADA
Haddii aad ka heshid raqiis, waxaan soo celineynaa faraqa
Home xiriirka Search InstaShop Gaadiidka Lacagaha Damaanad qaadka Shuruudaha
© 2010-2020 - Powered by GeekColor.com® »#BEIDIFIFENT - Xuquuqda daabacaadda
Page 1 La abuuray Sketch.